Xaraashka Xaraashka ah ee Iibinta Jaban Bonnell Joodariga Guga Loogu talagalay Soosaarayaasha Afrika
Hel macluumaad! ka hel faahfaahinta ku saabsan Hot Iib Jaban Bonnell Joodariga gu'ga ee Afrika, joodariga guga bonnell, furaashka damask Bonnell, Joodariga Bonnell
R $ $> Rayson ee aagga warshadaha Rayson, Huasha Road, Shishan, Foshan High-Tech Zone, Guangdong, China. Waxyaabaha ugu Muhiimsan ee Xaraashka Xaraashka ah Iibi Bonnell Joodariga Guga Ee Loogu Talo Galay Soosaarayaasha Afrika
Shayga waxaa lagu gartaa dabacsanaantiisa la hagaajiyay. Waxay awood u leedahay inay taageerto jihooyin badan si loo dhammaystiro noocyo kala duwan oo hawlo kala duwan ah.
Rayson Global Co., Ltd waa shirkad wadaag ah oo Sino-US ah, oo la aasaasay 2007 oo ku taal Shishan Town, Foshan High-Tec
Macaamiisha doonaya inay wax badan ka ogaadaan wax soo saarkeena cusub
ama shirkadeena, kaliya nala soo xiriir. Waxaan balanqaadeynaa in badeecada loo diro macaamiisha iyagoo nabad qaba. Haddii aad wax su'aalo ah qabtid ama aad rabto inaad waxbadan ka ogaato our si toos ah noo soo wac. Sannado horumar ah ka dib, waxaan la sameynay xiriiro iskaashi muddo-dheer macaamiisheenna adduunka oo dhan. Fadlan la soco oo waxaan xaq u leenahay inaan xaq u leenahay inaan dhoofino badeecadayada isla markaana aysan jiri doonin wax dhibaato ah oo soo gaarta badeecada la keenay. Waxaan si kal iyo laab ah u soo dhawaynaynaa baaritaankaaga iyo wicitaankaba. Waa maxay qaababka lacag bixinta ee aad aqbasho? LC ee aragtida / TT, 30% Deposi iyo 70% dheelitirka ayaa ka soo horjeedda nuqulada dukumiintiyada dhoofinta ee witinin 7 maalmood oo shaqo ah. 1. Kartoon dusha ka saar dusha sare ee qolkaaga jiifka, si taxaddar leh u kala bixi furaashka oo sariirtaada dul dhig.
2. Si taxaddar leh u jar bacda kore maqas adoo hubinaya in aan laga gooyn caagga xun ee gudaha ama joodariga, ha ku dacweyn mindi. 3. Joodariga faaruqinta ah ee faaruqinta ku xir sariirtaada dul dhig 4. Si taxaddar leh u jar bacda oo ay weheliso saacadda sida furaashku isla markiiba u bilaabmayo inuu burburo, Ka saar bacda balaastigga ah. 5. U oggolow 24 saacadood furaashkaaga cusub inuu si buuxda u ballaadho.Ma booqan karaa warshaddaada? Haa, ku soo dhawow inaad soo booqato warshadeena wakhti kasta, waxaan u dhownahay garoonka diyaaradaha caalamiga ee Guangzhou Baiyun, kaliya waxay ku qaadataa hal saac baabuur, waxaanan kuu diyaarin karnaa baabuur si aan kuu soo qaadno.